Ted Lasso uye Stillwater vakasarudzirwa Peabody Awards | Ndinobva mac
Ted Lasso uye Stillwater vakasarudzirwa Peabody Awards
Ignacio Sala | 05/05/2021 21:00 | Apple TV, Noticias
Iyo Ted Lasso nhepfenyuro yave iyo pchigadzirwa chakabudirira kwazvo cheApple vhidhiyo yekushambadzira sevhisi, akateedzana anoramba achigamuchira mazita. Ino nguva ndiyo Peabody Awards. Nekudaro, haisiriyo yega Apple TV + dzakateedzana dzakagamuchirwa nemakwikwi aya.
Iwo Peabody Awards akarongeka neNational Association of Broadcasters uye vanokudza kugona muwairesi uye terevhizheni nenzira imwecheteyo iyo Pulitzers vanoziva yakakosha utapi venhau. Iyi mibairo inoratidza iyo kudzvanya nyaya dzemagariro nekusimbisa manzwi emazuva ano ari kubuda.
Kunze kwaTed Lasso, imwe nhepfenyuro iyo yakagashirawo kudomwa kwegore rino Peabody Awards ndiwo akateedzana evana Diki zen nyaya (Zvichiri mvura). Mapurogiramu ese ari maviri akasarudzwa kubva kune vanopfuura makumi matanhatu vakasarudzwa kubva kune anopfuura 60th zvirongwa zvinotepfenyurwa muna1.30.
Sangano rePeabody Awards rakasarudza Ted lasso nekuti "inopa tariro yakasimba uye murume anopokana nehuturu." Ted Lasso anotevera murairidzi wenhabvu uyo ​​asainwa nechikwata chenhabvu cheChirungu, kunyangwe asina ruzivo.
Iyi mibairo yakaratidzawo kuzvipira kwechikamu Chidiki Zen Nhau dze dzidzisa vana kufunga. Chirongwa ichi chinotiratidza panda ine hungwaru iyo inobatsira vana kuziva nekunzwisisa manzwiro avo pamwe nematurusi anovabatsira kutarisana nezvinetso zvavo zvezuva nezuva.
Sangano achazivisa vanokunda mumakwikwi aya muna Chikumi, muchiitiko chaicho chavachapemberera. Iyi haisi yekutanga nhepfenyuro yekugamuchira Peabody Awards kudomwa. Gore rapfuura, akateedzana Dickinson akagashira zita rekuti "fungidziro yekufungidzira nezve hupenyu hwanyanduri Emily Dickinson."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Ted Lasso uye Stillwater vakasarudzirwa Peabody Awards
Ungade here Apple kubatanidza iyo nyowani iMac dhizaini mune mamwe ese maMacBooks?